Fitsapana klinika vaovao momba ny fitsaboana ny homamiadan'ny prostate
HP518 dia hita sy novolavolain'ny sehatra fikarohana zava-mahadomelina manimba proteinina kendrena an'i Hinova. Manana fahafahana handresy ny fanoherana ny homamiadan'ny prostaty izy io noho ny fiovan'ny AR manokana.
Chimeric degraders dia molekiola kely bifunctional izay mampiroborobo ny fahapotehan'ny proteinina kendrena manana hery ambony sy fifantenana avo. Ity teknôlôjia ity dia afaka mikendry tanjona tsy azo tsaboina ary mandresy ny olan'ny fanoherana ny zava-mahadomelina amin'ny fanafody molekiola kely nentim-paharazana.
"Ity dia dingana lehibe amin'ny fandrosoan'ny ezaka ataontsika manomboka amin'ny fikarohana zava-mahadomelina mankany amin'ny fandalinana klinika," hoy i Yuanwei Chen, Ph.D., Filoha sy Tale Jeneralin'ny Hinova. "Faly izahay amin'izany ary manolo-tena hitondra safidy fitsaboana vaovao ho an'ny marary manerantany!"
Amin'ny alàlan'ny sehatra fitadiavana zava-mahadomelina manimba proteinina kendrena, dia afaka mijery haingana ny hetsika fanimbana proteinina i Hinova ary mahavita famolavolana mahomby sy fanatsarana ireo mpandoto chimeric. Ankoatr'izay, i Hinova dia manana traikefa lalina amin'ny fanaraha-maso ny famokarana simika ny kapoaky ny chimeric degrader.
Previous Fampahalalana vaovao momba ny fomba mety hitondrana karazana diabeta tsy fahita firy ny fifampiresahana eo amin'ny sela pancreatic
Manaraka Kia EV6 izao no nandresy ny fiara tamin'ny taona 2022 Inona no fiara? mari-pankasitrahana